စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာတွေဆိုတာက ငပျင်းတွေ လက်ကြောမတင်းသူတွေကွ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာတွေဆိုတာက ငပျင်းတွေ လက်ကြောမတင်းသူတွေကွ
စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာတွေဆိုတာက ငပျင်းတွေ လက်ကြောမတင်းသူတွေကွ
Posted by phone_kyaw on Dec 15, 2011 in Aha! Jokes, Satire | 51 comments
အောင်မငှီးးးးးးးးးးးး ရေးမိသွားပြီ… မနေနိုင်လို့ … ပြေးဟေ့… မောင်ဝင်းဇော် …
(ဘုန်းကျော်သည် သြစတျေးလျနိုင်ငံတွင်နေသည်။ ၁၉၇၉-ခုနှစ်တွင် အင်းစိန်မြို့ တွင်မွေးပြီး မင်္ဂလာဒုံမြို့ နယ်ရှိ စစ်တပ်ထဲတွင် ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ အဖေဖြစ်သူသည် တကြပ်ကြီးတဦးဖြစ်သည်။ ၁၉၉၉-ခုနှစ်တွင် ဘုန်းကျော်တောခိုခဲ့သည်။ နယ်စပ်ကလူ့ ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွင် ၁၉၉၉-၂ဝဝ၅ ထိ တာဝန်ထမ်းသည်။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်သည် သြစတျေးလျနိုင်ငံရှိ ရွှေတူးဖော်ရေးမိုင်းတခုမှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားတဦးလည်းဖြစ်သည်။ ခလေးသုံးယောက်ရှိသည့် အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်သော်လည်း စော်ချောချောမြင်လျှင် ငန်းတက်သည်။ ဇနီးဖြစ်သူသည် မွန် လူမျိုးဖြစ်သည်။ ဘုန်းကျော်သည်လည်း ပအိုဝ် တပိုင်း ဗမာတပိုင်းဖြစ်သည်။ အဖေသည် သာယာဝတီနယ်သားဖြစ်၍ အမေသည် သထုံနယ်သူဖြစ်ကြောင်း။ ဘုန်းကျော်ရေးသည့်စာများအား လုံးဝတာဝန်ယူသည်။)ဆိုတော့
မင်းဘာသာမင်း “နယ်စပ်ကလူ့ ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွင် ၁၉၉၉-၂ဝဝ၅ ထိ တာဝန်ထမ်းခဲ့သည်” ဒါတွေဖေါ်ရေးရအောင် အထင်ကြီးစရာဘာရှိလို့လဲ ၁၃နှစ်သားဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့တော့ခိုတာလဲ
post ခေါင်းစဉ်ကို စိတ်ဝင်စားသဖြင့် ၀င်ဖတ်ကြည့်မိသည်။
ကုန်ဆုံးသွားသော အချိန်များကို နှမြောမိသည်။
အစာစားရန် အခင်းကြီး အခင်းငယ်သွားရန် နံဘေးမှ (သူ၏မိန်းမမှ) သတိပေးနေရလောက်အောင် စာရေးစာဖတ်သွားသည်။
တစ်နေ့ သုံးနာရီလောက်သာ အိပ်ချိန်ယူသွားပြီး အသက်သုံးဆယ်ကျော်တွင် တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးရင်းသေဆုံးသွားသည်။
အပေါ်က ကိုဝင်းဇော် ကိုရင်မောင်တို့ရေးသော comment ကိုပဲ ပြန်ညွှန်းခြင်သည်။
ဘုန်းကျော်တာဝန်ယူသော post များကိုပြန်လည် သုံးသပ်ပေးပါ။
ရွှေည၀ါ ဆရာတော် post ကိုလည်းကြည့်သင့်သည်။
၀ါးလားလား စိတ်အချဉ်တွေ ပေါက်နေပီးသကာလ
ကဘာဂျီးကို ထုခွဲနေသူ တစ်ဦးပါတကား
စစ်တပ်ထွက်တဲ့ကောင်မှန်သမျှ ဘယ်ကောင် ကောင်းဘူးလို့လဲ။ အကုန်လုံး လိပ်မျိုးတွေကြည့်ဘဲ။
( တိုင်းပြည်ကို အကျိုးပြုတော့ စစ်သားများမပါ )။ဘုန်းကျော်သည် သြစတျေးလျနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးခိုလှုံမှုဖြင့်နေသည်။ ၁၉၇၉-ခုနှစ်တွင် အင်းစိန်မြို့ တွင်မွေးပြီး မင်္ဂလာဒုံမြို့ နယ်ရှိ စစ်တပ်ထဲတွင် ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ အဖေဖြစ်သူသည် တကြပ်ကြီးတဦးဖြစ်သည်။ ၁၉၉၉-ခုနှစ်တွင် ဘုန်းကျော်တောခိုပြီး အီးပါသည်။ နယ်စပ်ကလူ့ ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွင် ၁၉၉၉-၂ဝဝ၅ ထိ တာဝန်ထမ်းသည်။လာဘ်စားလို့ အကန်ခံရသည်။လက်ရှိအလုပ်အကိုင်သည် သြစတျေးလျနိုင်ငံရှိ ရွှေတူးဖော်ရေးမိုင်းတခုမှ သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားတဦးလည်းဖြစ်ပြီး သစ်ပင်များကို ခုတ်ပြီးရောင်းသားပါသည်။ခလေးသုံးယောက်ရှိသည့် အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်သော်လည်း စော်ချောချောမြင်လျှင် အငန်းမရ လောင်တီးတတ်ပါသည်။ ဇနီးဖြစ်သူသည် မွန် လူမျိုးဖြစ်သည်။ ဘုန်းကျော်သည်လည်း ပအိုဝ် တပိုင်း ဗမာတပိုင်းဖြစ်တော့ ဘာလုပ်ရမှာလဲ ငါလည်း ဘီအီတစ်ပိုင်း ရေတစ်ပိုင်း ဘဲကွ။အဖေသည် သာယာဝတီနယ်သားဖြစ်၍ အမေသည် သထုံနယ်သူဖြစ်ကြောင်း။ ဘုန်းကျော်ရေးသည့်စာများအား လုံးဝတာဝန်ယူသည်။
သူကြီးတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် အဘိုးကိုယ်တိုင် စာရေးဆရာတစ်ယောက်ပါ။ စော်ကားတော့မခံနိုင်ပါဘူး။